Imoto ingumthombo wengozi eyengeziwe, futhi kungakhathaliseki ukuthi bazama kangakanani ukuphoqa abantu abahlala ngemuva kwesondo, kusengenwa yesikhumba esingazi lutho futhi senza ukuphendula okuhlukahlukene kwe-psyche yethu, okuyinto eyinhloko yesabayo. Ukwesaba emafenjini alo nokubonakaliswa ngokwemvelo kuvusa izinhlobo nezinqubo ezahlukene zokulwa nazo. Abanye babo beza kithi bevela ku-Stone Age, abanye-bazalwa yizimpumelelo zakamuva zesayensi yanamuhla.
Enye yezindlela zokuqeda ukwesaba nokugwema imiphumela engathandeki ukucwasa nezinkolelo-ze ezavela kumlingo wasendulo. Ngempela bazama ukwenza umonakalo ngekusasa ngokwenza noma yiziphi izinkolelo noma amasiko (abuyelwe ekhaya - babuke esibukweni, babone umgwaqo ohamba phambili wekati elimnyama - bachithe izikhathi ezintathu ngaphezulu kwehlombe lakho lesokunxele, futhi lolu hlu alupheli).
Akunakwenzeka ukuthola umuntu ongazi umuzwa wokwesaba. Kodwa ngokulandela ngokweqile ukwesaba, kuye ngokuthi, ukuziphatha komuntu kuyashintsha, uba yizinkolelo-ze, ngakho-ke akuzithembi. I-encyclopedia yefilosofi ichaza ubandlululo njengoba umbono ubonisa ingqondo, into ethile engazi kahle, ngaphandle kokucabanga. Ukuphindaphinda kabusha kubhekisela ezingxenyeni ezingenangqondo zomuntu ngamunye nokuqaphela umphakathi - izinkolelo-ze ezihlobene nenkolo. Ubandlululo luyinto engathandeki emphakathini ngesimo, hhayi ngokusekelwe ekuhlangenwe nakho okuqinisekisiwe, ngokomzwelo nangokweqile, kepha nokho isineke futhi ingenakukwazi ukushintsha ngaphansi kwethonya lolwazi olunengqondo.
Inkolelo-ze yinto ebandlulula ukuthi umuntu uthatha njengamabutho angaziwa angakwazi ukuveza izenzakalo futhi ngezinye izikhathi ngisho nokubathinta. Inkolelo-ze ihlanganisa ukucabanga, ngokuvamile okungazi lutho, ukuthi la mabutho angabhekana nokuvikelwa noma angene ekuhlanganyeleni nabo.
Inkolelo-ze ibonakala ngezinye izinhlobo zokungazikhohlwa: ama-talismans, izithombe, imilingo, njll. Indawo ekhethekile izothathwa: kuthiwa ikwazi ukubikezela ikusasa futhi ingayithonya. Okushiwo ngokwengqondo kokuzinza kwezinkolelo kungaxhunyaniswa ngokuthi amacala okuqinisekiswa kwawo anqunywe, futhi amaqiniso okusobala okusobala aphakanyiswa.
Ama-ethnographers aqaphela ukuthi zonke izizwe zakudala zinemibonakaliso yabantu - eziningi ezingenalusizo ekutholeni imikhosi yemilingo yokuqala, okuyinto enzima ukuthola incazelo enengqondo. Isibonelo, impilo yonke yeChukchi igcwele ukuvinjelwa okungenakubalwa, iziphonso, imithetho kanye nokubhula, okungaqondakali okumangalisayo: ukuvinjelwa ukushisa ebusika ngesihlahla, ukuvinjelwa iminyaka engaphezu kwemihlanu ukuhlala kwelinye izwe, ukuvinjelwa kokwakha umlilo esikebheni, ukuvinjelwa kokusebenzisa umlilo wangaphandle, njll nezinye izizwe kukhona nokuvinjelwa kwabo - njengoba nje kungaqondakali kahle ngokwemigomo yolwazi. I-Papuans yaseNew Guinea, kusukela ekuzalweni kuya ekufeni, ilawulwa ukwesaba inhlekelele, okudinga zonke izinhlobo zezinkolelo zamasiko okufanele zivikele abantu.
Ngumuphi umqondo kulezi neminye imithetho eminingi kanye nokuvinjelwa okubheka impilo yezizwe ezisezingeni lokuqala zokuthuthukiswa? Phela, uma izenzo ezinjalo zomkhuba zingasetshenziswa nhlobo, abantu babezokuyeka. Ekuphileni kwangempela, ngokuphambene nalokho, imikhosi iphikelela kakhulu futhi iqhubeka iminyaka eminingi, ngisho nangamakhulu eminyaka! Kodwa ukuphazamiseka ukuthi ukuzamazama kwamagilisi kusebenza! Basiza ngempela indoda! Kukhona umbuzo owodwa kuphela - ukuthi kwenzeka kanjani. Imikhuba nemikhosi yemilingo ayizange ithinte abantu abakuzungezile nhlobo, ikakhulukazi hhayi emvelweni, kodwa ngokuyinhloko ekuqaphelweni komuntu owenza umkhosi, ukuzethemba okuqinile, ukuzola nokuzwa amandla akhe. Futhi njengoba izimfanelo ezibalulwe, ngokungangabazeki, zasiza ekuphumeleleni lokhu noma lelo bhizinisi, abantu babezimisele ukubeka impumelelo yabo yokwenza imilingo.
Izinkolelo-ze nokukholelwa kwezibonakaliso zingumngane ongenakwenzeka wabameleli bomsebenzi ohlangene ngokuqondile nezinengozi nezingozi. Bangabantu abaningi emkhunjini nabashayeli bezindiza, abavukuzi namadoda ase-stunt. Ungalahleki ngemuva nabashayeli abangeke bakwazi ukwenza uhlu lokucwasa okuningi, hhayi okungafani nalokho okuvela olwandle noma kwezindiza, kodwa ukugcwalisa i-niche yabo - izimpawu zezimoto.
Yebo, izimoto - lena yindawo encane kakhulu yokuphila komuntu, kepha lapha ungase futhi uqoqe imiqulu eminingi esihlokweni: izimpawu zomuntu mayelana nezimoto (njengokwezifiso ezichazamazwi, ukubeka igama eliyisisekelo endaweni yokuqala).
Izimpawu ezithandwayo kakhulu zezimoto - kungukuthi kungavunyelwe, kepha ukuvinjelwa ngokubi kakhulu ngokuziqhenya ngokushayela kwakho okuphephile ngaphambi kokushiya - ukuze ungabi yi-jinx.
Ukuthola imoto entsha - ungqimba okhethekile uzothatha. Uma lo mshini ungewona owokuqala, futhi lowo owedlule wawunqotshwe ngokuphepha ngamakhilomitha amaningi, kunconywa kakhulu ukudlulisela kusuka endala kuya kokunye okukuvikelwe - isithombe noma nje "imali" ewusizo. Futhi-ke leli hamba le-iron ngeke lisebenze nakakhulu kunalokudala.
Indawo ekhethekile yezibonakaliso mayelana nezimoto inikezwa ezimotweni "ezingenangqondo". Sekuyisikhathi eside kusungulwe ngokuqinile, futhi amahemuhemu abantu abonise ukuthi kunezimoto njalo eziwela ezingozini, ezebiwe noma zihlawuliswe. Bavame ukushintsha abanikazi, ukudlulisela i-karma yabo kubathandekayo abaningi bemoto entsha. Ngakho-ke, izimpawu ezithandwayo aziphakamisi ukuthenga imoto, uma ingabalwanga ekuqotheni, isesimweni esihle, futhi ithengiswa kakhulu ngaphansi kwentengo yangempela - kunengozi yokuba esinye isisulu sokuzilahla. Futhi ngalokhu kuxhunyiwe enye uphawu - ukuthenga imoto emisha, okokuqala kudinga ukuhamba ngokuqapha okukhulu, ngoba ngisho nengozi encane ekuqaleni "endleleni yokuphila" yemoto ingaba yizinkinga ze-biography yakhe yonke yesikhathi esizayo, imoto izobe iwele njalo ukuvuselela kabusha.
Futhi ngokuphambene - izimoto zabantu abacebile nabaphumelelayo ezithengiswa ngabanikazi bazo zifuna kakhulu, kubonakala sengathi abanikazi babo abasha bancike eqinisweni lokuthi umnikazi wabo owayengumnikazi uzophinde athululelwe.
Futhi kukhona isigaba esikhethekile kakhulu somshwalense wezimoto - indlela yokugwema ukukhokha emaphoyiseni. Kodwa lapha, njengoba ochwepheshe bekusho, amandla namandla omlingo, kanye nezimpawu, futhi ngisho nokukhalaza emabuthaneni aphakeme akusizi amandla ... Ababhali nabasebenzi abahluleki kunoma yikuphi ukukhohlisa, izinhloso kanye nezinhloli!
I-Horoscope ngoJanuwari: Ama-Aries
I-Horoscope ngoJanuwari ngamathole
Izikali zeHoscope ngoJanuwari
Isifuba sesokunxele sithandeka kanjani?
Indlela yokujwayela ikati ukuhamba ebhodweni?
Impilo yowesifazane okhulelwe nokuzivocavoca
Imvubelo Mask ebusweni
Ukuvuvukala kwamapayipi enganeni: izimpawu
Okwenza lesi sibeletho singenzi isivumelwano ngemuva kokubeletha
Indlela yokubukeka ebiza kakhulu futhi ehlanjululwe kahle ngaphandle kwezindleko ezithile: Izithombe ezenziwe ngemfashini nezeluleko zengqondo
Amakhukhi ane-nut-nut paste
U-Alisa Arshavin usekhulile kakhulu kunomnyaka womshado nomdlali webhola, isithombe
Uhlelo lukabuhle luka-Anna Kournikova: imithetho engu-3 kulabo abafuna ukubheka konke okungu-100!
Tattoo yesikhashana: ingozi ngenxa yobuhle
U-Oleg Yakovlev enkulumweni yokugcina utshele mayelana nama-depressions, ividiyo